emelitere ikpeazụ: Dec. 27 2017 | 5 min agụ
Mgbe mbụ m zutere enyi m nwoke, Christopher, afọ ise gara aga, M nwere naanị otu ụzọ nke ewepụghị akpụkpọ ụkwụ - scuffed akpụkpọ ụkwụ si na mahadum. Iche echiche azụ na m undergraduate ahụmahụ, M na obi abụọ m ọbụna yi ha 10 ugboro, dị ka elu ọba ụkwụ rụrụ m ndị m njem gaa na site na klas gwụla ma ihe anụ ọhịa ahụ nke ice ntekwasa na campus, na nke uche m dabeere na a nkpirikpi. Na naa, M embellished nke ikpeazụ (dịtụ.) A girly girl n'ụzọ ọ bụla, Amaghị m otú e si eme sweatpants mara mma ma ọ bụ ala na-egosi ihu m na-enweghị a etemeete nkpuchi, ọ dịghị mgbe m bu ụzọ hụ nke a mgbanwe. Ma, ọ mere, na m nwere olileanya na ọ na ndị inyom ndị ọzọ, nakwa.
Ọ bụghị na ọ dị ihe na-ezighị ezi na etemeete na stilettos - enwe ha! Dị adịghị adabere na ha. Mgbe m na-ele na magazin na mgbe nile barrage nke mgbasa ozi gbara anyị gburugburu, Adịghị m ga na-eche ya mere ọtụtụ ndị inyom na shaky ala na obi ike ngalaba. M na-akọrọ gị ndị na-esonụ ihe m na-amụta na m feline enyi na ogologo-N'ọgbụgba égbè nwoke ná ndụ m:
1. Nabata gị na onye markings: Na otu nke mbụ m okpomọkụ ụbọchị na Chris, Egwu jidere m banyere otú icha mmirimmiri m anya na malitere onwe-esiji akpụkpọ anụ. Mgbe m na-ekwu na m icha mmirimmiri, M pụtara m alabasta n'ókè translucent, otú a ngwa-fix dugara ihe ọ bụla ma streaks nke oroma na ụta. Mgbe ọ (akpachara) ajụjụ ma ọ bụrụ na m na-etinye na onwe-esiji akpụkpọ anụ, M wee dị ọcha (ọ bụ ezie na adịghị na nkịtị, dị ka ndị metụtara a izu nke exfoliation.) Ọ jụrụ m ihe mere m ga-eme na ihe m nwere a mara mma ma na obere anụ ụda. M ga-mgbe nụrụ na onye ọ bụla na-ezo aka m na akpụkpọ ahụ, na m chere na otú na-enweghị isi n'ihi na-agbalị ịgbanwe ihe pụrụ iche na a ngwaahịa na smelled dara ma hapụrụ m pajamas na-acha ọcha Uwe muddied.
Anyị mmekọ chọrọ ka anyị anya ka anyị onwe anyị, na anyị kwesịrị iji na, nakwa. Ọ bụ yiri enwe a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị profaịlụ foto na anya ihe ọ bụla dị ka gị, photoshopped gara aga n'ókè nke ude. Anyị nile pụrụ iche, na ihe ndị na-eme ka anyị dị iche iche na-eme ka anyị guzo si ìgwè mmadụ. Chọta obi ike na-egosi gị ezigbo markings na ọ bụghị anyaukwu ndị ọzọ '.
Dị ka nwamba, otu esetịpụ ezi. A calico na-enweghị ihe ndị mara mma na-akara karịa a tabby - na ọ bụ ndị nile na-anya nke beholder.
2. Ọ bụghị ahu ihere: M abụọ nwamba bụ obere, abụọ bụ nke nkezi Mee, na abụọ bụ nnukwu. Ha amaghị nke a. My nnukwu cat jumps na nwamba ọkara ya size na-eche ihe mere na ha anaghị obi ụtọ na mgba play ụbọchị. Ọ bụrụ na naanị ndị inyom pụrụ ịkwụsị ahụ-bashing anyị abụọ anagh'akpa na oddly ikwado. Anyị na-abịa nile di iche iche nke shapes na nha, ma m na-anụ ka ọtụtụ n'ime ndị enyi m na-aga na na banyere aghọta ahu flaws. Ndị a ka nghọta na-ahụ tinyere egwu banyere otú ndị ikom ele ozu ha tụnyere Victoria Nzuzo ụdị. Ụdị onwe-okwu na-eduga ná generalizations anyị na-eme banyere bụghị nanị na anyị onwe anyị na ozu, ma ozu n'ozuzu. M atụ egwu mgbe m nụrụ ruturu dị ka, "Real ndị inyom curvy." Inyom mara mma na-abịa otu n'usoro nke shapes, ya mere, ka si na-anabata ihe ọ bụla ọnụ ọgụgụ na-ahụ anyị na anyị healthiest ụdị. Men achọghị ịnụ anyị na-akwa iche anyị na ozu, na anyị niile na-kwa-na-na-etinye ha na ọnọdụ ebe ha nwere ike ọ gaghị emeri, n'agbanyeghị ha Ibọrọ. Kate Upton, Kate Winslet, na Kate akpaetu bụ niile dị iche iche na-ewuli, ma na-adịghị na ha niile n'eluigwe na ụwa e weere mara mma?
N'ihi na ndị fọdụrụ n'ezinụlọ oge, Enweghị m ike iguzo na m ụkwụ na-adịghị arapara-mkpa, otú were juru m anya mgbe Chris m gwara m na ọ hụrụ n'anya m ụkwụ na-atụ aro na m na-eyi ihe nịịka na skirts. Na ezi onye na-aga na-amasị gị na ahu ma ghara ịmanye gị reshape ya. Echeta mgbe nile na.
3. Enwe nri: Of, na mkpali nke emeso. Mgbe m jijiji na akpa enticement, niile m isii nwamba ana-atụ na ụkwụ m. Ha hụrụ nri ruo n'ókè ebe ọ bụ ihe omume. Ònye pụrụ ịta ha ụta? Dị nnọọ ka ọtụtụ ndị inyom, M busoro agha na nri ka m ahụhụ n'elu-kwuru ahu ihere nke na-enweghị ike zuru okè Helen Nkume na a bikini. M itu pound ise ọzọ ugbu a karịa mgbe Chris na mbụ m zutere, ma n'ọnọdụ na, M na-akọrọ nza nke Pizza ya n'oge Friday n'abalị TV binges. M ga-ahia ndị maka ihe ọ bụla ọnụ ọgụgụ na ọnụ ọgụgụ. M nnọọ ihe ọma na ahụ m na 31 karịa m mgbe nọ m na-eto eto.
Iri ike bụ ihe dị ebube, na m a kwenyesiri ike na-elekọta onwe (hụ okpuru.) Ịdị ndụ na ya niile flavors, ezie, bụ mara oké ihe, nakwa. Unu elekwasị nnọọ na gị kalori oriri na ị hapụ track nke ịnụ ụtọ nri - na mkparịta ụka na-esokwa ya.
4. Ledo onwe gị anya: Mgbe m nwamba na ike gwụrụ, ha na-ehi ụra. (Ha nile na-nnọọ ike gwụrụ, n'agbanyeghị.) Mgbe ọzọ cat iwe ha ma ọ bụ-abanye na a họpụtara ohere, ha enweghị mmasị na na na-ekwupụta nlelị. Ya mere, mgbe, anyị na-emesi ihe na-ekwu okwu uche anyị, ma ọ bụ anyị ka onye na-emeso anyị ihe n'ụzọ na anyị agaghị na-emeso onye ọzọ. Nwamba, na ndị ikom n'ihi na nke ahụ, nwere ọchịchọ igbu mkporohihi na-esi na ya na, si otú na-akpụ akpụ na-eji ndụ ha na ọ bụghị ịnọgide na-ewe iwe ma ọ bụ obi ilu. Ha na-emekarị adịghị ihe mere onwe, na ha maara na ọ dị mma ka gị ezi obi na-egosi karịa ịnọgide na-egosi na onye na ịfụ elu e mesịrị.
Ime ihe n'eziokwu bụ oké egwu na mmekọrịta, na nri onye ga-ahụ gị n'anya, ọbụna mgbe ị na-na na na-erughị loveable ka n'èzí ụwa. Ọ bụrụ na ị na-apụghị olu ihe ị chọrọ n'ezie, mgbe ahụ otú ga-onye gị na-enye gị ya?
Nke a bụ ụdị a ike otu, karịsịa maka ndị anyị na-agbalịsi ike n'ebe agreeableness. Ọ bụrụ na ọ bụ enyemaka ọ bụla, gbalịa icheta sụgharịa ihe n'ụzọ na-ị na-agaghị na-ewe iwe ma ọ bụrụ na ha na-sịrị gị. Nke ahụ ụzọ, na ị na-asị ihe i chere na-enweghị ida ụra nke. Ka ị na-eme nke a, ihe ndammana ọ ga-abịa gị. Na n'ụlọ m, ima-ọsọ na purring-ma nkịtị noises, na ha abụọ na-egosi a ụdị ùgwù: ndị ọzọ ma na anyị onwe anyị.
5. -Adị oge: M na-tụrụ ya n'anya otú m nwamba ekiri nnụnụ na a na-elekwasị anya yiri otú Chris arụ video egwuregwu. The ochie nke ịkwụsị na-esi isi Roses ama n'ihi a mere - nke na-eweta m laghachi elu ọba ụkwụ.
My ochie akpụkpọ ụkwụ collection nwere ụfọdụ ọmarịcha na agba na strappy embellishments, na m ka nwere nnọọ ole na ole na abụọ na-eche na m kaboodu maka nri ekike, ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ a polar vortex ida ya adịgide. Mgbe Chris na m wee na anyị na njem mbụ ọnụ Las Vegas, M juru n'ọnụ banyere ise na abụọ, na-eche-adịghị agwụ agwụ sequins na feathers (o doro anya na, m na isi, Vegas pụtara ejiji dị ka a showgirl.) Olee otú ọtụtụ ndị na abụọ ka m ejedebe yi? Ọdachi. Kama, m Target akpụkpọ ụkwụ iti ihe warara na izu, na m na-echeta na-eche nnọọ ekele m nwere ha. Ọtụtụ ụmụ agbọghọ jisiri anyị gburugburu na akpụkpọ ụkwụ, nkwarụ site peep-ụkwụ ịta. M obi m chọrọ ka ha chụọ ha a bench na ụfọdụ mmachi ọrịa AIDS, Ịmara na m n'oge iri abụọ onwe ga agbalịsiwo n'akụkụ ha.
My nwamba ga mgbe uche si na osa-ekiri nnọọ otú ha nwere ike ire ụtọ ha ajị anụ azụ na ebe, ọ dịghị mgbe m nwere ike na-na Chris nwere m eyi akpụkpọ ụkwụ na a 4 anụ ọhịa inwego. Ọtụtụ mgbe, ndị kasị mma ezumike ịdabere na ezi uche akpụkpọ ụkwụ na ọtụtụ awa na-eme ihe ọ bụla fọrọ.
Ndụ bụ ihe niile banyere na-eto eto, na mmekọrịta pụrụ inyere anyị aka mma-aghọta onwe anyị dị ka anyị na-asụ ngọngọ na ihe ịga nke ọma. N'otu aka ahụ, mmekọrịta pụrụ irite uru site onwe-obi ike, ọrụ n'eziokwu, na imikpu onwe ụfọdụ emeso ugbu a, mgbe. Olileanya, anyị na-ahụ a ezi nguzo nke hisses na (ukwuu n'ime) purrs n'ụzọ.